AutoPitch: Akpaaka Email maka Ndị Nnọchiteanya Ọrịre Ahịa | Martech Zone
Enwere ọtụtụ oge ebe ndị na-ere ahịa ahịa nwere nnukwu ndepụta, mana mbọ achọrọ iji zipu ozi-e n'otu oge na-ewe nnukwu mbọ. AutoPitch na-ejikọ email gị ozugbo, na-enyere templating aka, wee kọọ akụkọ ọ bụla na mmemme ọ bụla gbasara ozi ịntanetị ndị ahụ. Younwere ike ịtọzigharị usoro izipu na ndepụta gị.
Dọrọ ndepụta ndu oyi n'ime ikpo okwu email nwere ike ịnweta ụlọ ọrụ na nnukwu nsogbu na ndị na-eweta ha. AutoPitch na-enye gị ohere ijikọ ma zipụ ozi ịntanetị ahaziri iche site na akaụntụ ụlọ ọrụ gị.
Ndu Ndu - Hụ ihe ndekọ kọntaktị zuru ezu, ma lelee akụkọ nkwukọrịta n'otu ebe ka ị nwee ike ijikwa ndị na-eduga n'enweghị nsogbu.
Ozi jikọrọ ọnụ - Mail jikota atụmatụ gụnyere nsuso na-emeghe, pịa nsuso, ozi jikọtara ịhazi, ịhazi usoro, na ndị ọzọ.
Templates - Ikekọrịta ndebiri email, maka otu ahụ dum. Ọ dịghị mkpa maka ịgbanwee site na otu ngwa gaa na nke ọzọ. Ihe niile n'otu ebe!
Nchekwa onwe Na-agbaso - Mee ka nzaghachi gị na ozi ịntanetị na-akpaghị aka. Zụlite ndị ọzọ na-eduga ma bulie arụmọrụ.
Ndepụta Mwepu - Tinye ngalaba na ozi ịntanetị na ndepụta mmechi, iji gbochie imebi CAN-SPAM.
ihe aga-eme - Mepụta, dozie ma nyefee ihe aga-eme ka ị ghara ịhapụ ịgbaso usoro.
I nwekwara ike ịrụ ọrụ AutoPitch maka otu niile site na otu akaụntụ. AutoPitch na-arụ ọrụ na Google Apps (Gmail), Microsoft Exchange, Office 365, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eweta email nke dabeere na SMTP.
Banye maka AutoPitch
Tags: akpaakaakpaaka emailG SuiteGmailedu ọgbọOffice 365ele ihe anyaNdepụta ọrụ ahịaemail oziSMTPndepụta mmechi